New – Page2– celepublic
မုံရွာမြို့တွင် ဘေးတွဲဆိုင်ကယ်နှစ်ရာခန့်က NLDအောင်နိုင်ရေးအတွက် မြို့တွင်းလှည့်လည် မဲဆွယ်စည်းရုံးမှု ပြုလုပ်
ယနေ့ မုံရွာမြို့တွင် ဘေးတွဲဆိုင်ကယ်နှစ်ရာခန့်က NLD ပါတီ အောင်နိုင်ရေးအတွက် မြို့တွင်းလှည့်လည် မဲဆွယ်စည်းရုံးမှု ပြုလုပ် Photo- ကောင်းခန့်လင်း(မုံရွာ)
ရဟန်း လှူသော ဆွမ်း ပြည်သူဒုက္ခရောက်တော့ ဘုန်းဘုန်းတို့လဲ မနေနိုင်တော့ဘူး
September 16, 2020 September 17, 2020 admin	0 Comments
ရဟန်း လှူသော ဆွမ်း ပြည်သူဒုက္ခရောက်တော့ဘုန်းဘုန်းတို့လဲ မနေနိုင်တော့ဘူး ပြန်ဆွမ်းပြန်လည်လှူကြပြီ(ရန်ကုန် အရိုးအကြောဆေးရုံ)ပြန်ဆွမ်းစမ်းချောင်းမြို့နယ်က ပုညဝတီ ကျောင်းတိုက်ဇေယျဝတီစာသင်တိုက်မှ ဆရာတော်ဦးဆောင်၍ ကြည့်မြင်တိုင် အရိုးအကြောဆေးရုံတွင် လှူဒါန်း #Thura_Aung
သေဆုံးမှုတွေ တစ်ဖြည်းဖြည်း မြင့်တက်လာသလို သူတို့လဲ လဲပြိုလာကျပြီ
ဩဂုတ် ၁၅ မနက် ၈ နာရီ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရ ကိုဗစ်လူနာသစ် ၁၀၄ ဦး အသစ်ထပ်တိုးခဲ့ပြီး စုစုပေါင်း ၃၂၉၉ ဦးရှိခဲ့ပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လူနာသစ်တွေ တစ်ဖြည်းဖြည်းများလာသလို သေဆုံးသူတွေလည်း တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ များပြားလို့လာနေပါတယ်။ ဩဂုတ်
၁ ရက်ကို ၁၀ ယောက်နီးပါး သေဆုံးမှုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ကိုဗစ်အခြေအနေ
(၁၆-၉-၂၀၂၀) ရက်နေ့ မနက် ၈ နာရီ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရ ကိုဗစ်လူနာသစ် (၁၃၄) ဦး အသစ်ထပ်တိုးခဲ့ပြီး (၁၅-၉-၂၀၂၀) ရက်နေ့ ည (၈:၀၀) နာရီသတင်းတွင် အတည်ပြု လူနာ (၂၀၃) ဦး တွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း
ကိုဗစ်ပိုးကူးပြီး ဆေးရုံမှာကုသမှုခံယူရင်း ပြန်ကောင်းလာတဲ့ လူနာတွေရဲ့ ပြောပြချက်
နေ့စဉ်နေ့တိုင်း 1. ဗီတာမင်စီ – 1000 သောက်ရတယ် 2. ဗီတာမင် အီး သောကရတယ် 3. နံနက် 10:00 – 11:00 အချိန်အတောအတွင်း ၁၅ – ၂၀ မိနစ်ကြာ
Z&A Medical Systemမှ ဆရာဝန် နှင့်ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများနေထိုင်ရန်အတွက်ရန်ကုန်မြို့မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ရွှေနှင်းဆီလမ်းတွင်တည်ရှိသော အခန်း၂၄ ခန်းပါ ၆ထပ်တိုတ်လှူဒါန်းခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိသည်။ အဆိုပါ၂၄ခန်းပါ၆ထပ်တိုက်ကို ရန်ကုန်တိုင်း COVID ကာကွယ် တိုတ်ဖျက်ရေးကော်မတီ သို့ ကိုလှူဒါန်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။၎င်းတိုက်တွင်ဆရာဝန်နှင့်ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းစုစုးပေါင်း၄၈ဦးနေထိုင်နိုင်မှာဖြစ အဆိုပါ၆ထပ်တိုက်တွင်ဆရာဝန်နှင့်ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများလာမည့်လသောကြာနေ့ မှစပြီး နေထိုင်နိုင်ရန် အတွက် Aircon
ဘွဲ့လာမယူနိုင်တဲ့ ကင်ဆာဝေဒနာရှင် ကျောင်းသူကို ဆေးရုံမှာ ပါမောက္ခကိုယ်တိုင် ဘွဲ့လာပေး
Asama ဆိုတဲ့ အသကျ ၂၄နှဈအရှယျ ထိုငျးကြောငျးသူ တယောကျဟာ ခြူလာလောငျကှမျးတက်ကသိုလျမှာ တက်ကသိုလျတကျရောကျ အောငျမွငျပွီးစီးခဲ့ပါတယျ။ ဒါပမေယ့ျ ဘှဲ့ပေးတဲ့ အခါမှာတော့ တကျရောကျယူနိုငျခွငျး မရှိပါဘူး။ ခြူလာလောငျကှမျးတက်ကသိုလျမှာ ဘှဲ့ပေးပှဲအခမျးအနားကို ထိုငျးဘုရင့ျသမီးတောျ တောျဝငျမငျးသမီး သီရိဒုံ Princess
ယနေ့အထိအတည်ပြုလူနာများအနက် သေဆုံးသူပေါင်း (၃၉)ဦး ရှိ
အမှတ်(၁) တပ်မတော်ဆေးရုံကြီး (ခုတင်-၁၀၀၀) မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၅၃၈) ခု စုစုပေါင်း ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၂,၄၂၄) ခုတို့အား ထပ်မံ စစ်ဆေးပြီးစီးခဲ့ရာ COVID-19 ရောဂါဓာတ်ခွဲအတည်ပြုလူနာသစ် (၁၃၄) ဦးတွေ့ရှိပါသည်။ ၂။ သို့ဖြစ်ရာ (၁၆-၉-၂၀၂၀)
ယနေ့မနက် ရောဂါပိုးရှိသူ (134) ဦး ထပ်မံတွေ့ရှိ
ယနေ့မနက် ရောဂါပိုးရှိသူ (134) ဦး ထပ်မံတွေ့ရှိ ရောဂါဖြစ်ပွားသူ စုစုပေါင်း (3636) ဦးရှိပါပြီ
အမေဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကတော့ပြောပြီ အိမ်ကပဲထောက်ခံအားပေးပါတဲ့ ကျန်းမာရေးကအရေးကြီးတယ်တဲ့လူစုလူဝေးနဲ့ထောက်ခံကြောင်းမပြပါနဲ့…။